Ny resak'i Keng lye sy ny biby 3D misy sosona | Famoronana an-tserasera
Ilay Mpanakanto monina any Singapour Keng Lyary mamorona sary sokitra toy ny biby izay hita tena izy, loko, résin ary fahatsapana fomba fijery mahatalanjona. La Lye dia mameno moramora ny lovia, siny, ary boaty misy sosona mifandimby acrylic loko sy ny tampina, ary mamorona fiainana anaty rano izay hita fa tena izy ka saika handalo sary. Mampiasa teknika mitovy amin'ny mpanao hosodoko Japoney ilay mpanakanto Riusuke Fukahori izay naseho tao amin'ity bilaogy ity herintaona lasa izay, na dia toa nanao dingana lavitra kokoa aza i Lye mipoitra avy eny ambony ny zavakanao sary hosodoko, manampy ambaratonga hafa refy.
Nanomboka ny andiany voalohany aho tamin'ny 2012, izay "fisaka" avokoa ny sary rehetra ary noforonina tamin'ny alàlan'ny sosona damina sy akrilika ny faritra lalina ao amin'ilay sary. Ny horita dia fanandramana fotsiny, te-hahita aho raha afaka manosika an'ity teknika ity ho any amin'ny ambaratonga avo kokoa. Aorian'ny fampiharana ny loko akrilika mivantana amin'ny resina dia nampiditra singa 3D amin'ity tranga ity aho, vato kely ho an'ny horita. Ho an'ny sokatra dia nampiasa hodi-atody sy loko akrilika ho an'ny sisa vita aho. Ny hevitra eto dia ny hanomezana ny sary ny vokany 3D bebe kokoa noho izany dia afaka manana fomba fijery tsara kokoa ianao amin'ny lafiny rehetra. Heveriko fa mbola misy teknika maro hafa hotadiavina.
Ka mazava, ny singa izay mivoaka avy eo an-tampon'ny resin dia singa ara-batana izay nolokoina mba hifanaraka amin'ny akrilika sy ny resina sosona, ity misy mahafinaritra Gallery miaraka amin'ny sanganasan'izy ireo, manaitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny resak'i Keng lye dia zava-misy sy biby 3D vita amin'ny akrilika